Property Agents Archives - Page2of4- Myanmar Classified Ads | မွနျမာ အခမဲ့ ကွျောငွာ | Myanmar Advertising
Home » Property » Property Agents (Page 2)
Free Business Listing, Other Stuffs to Sell, Property, Property Agents, Property for Sale, Stuff for Sale | myint thu | March 11, 2014
ဖိုးစိန်ကွန်ဒို ဖိုးစိန်လမ်း၊ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ 1750 square feets အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊အသင့်နေနိုင် 1-MBR, 2-single အရောင်း၊3500 သိန်း(အနည်းငယ်ညှိနှိုင်းနို...
condo penthouse for sale
Free Business Listing, Property, Property Agents, Property for Sale, Wanted | myint thu | March 11, 2014
အဆင့်မြင့် Condo ရောင်းမည် Condo(Penthouse) ဖိုးစိန် လမ်း ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ရန်ကုန်။ square feet 3500 တအိမ်လုံးပါကေးခင်းပြီး(အသင့်နေနိုင်) Master Bed Room- 5...
Property, Property Agents, Property for Rent, Stuff for Sale, Wanted | myint thu | February 1, 2014
****ငှားမည်**** Condo အခန်းသစ် ရွှေဘုံသာလမ်း၊ပန်းဘဲတန်း၊ရန်ကုန် 25×60(ပြင်ဆင်ပြီး)ဓါတ်လှေကားပါသည် ရုံးခန်းဖွင့်လိုသူများ(သို့ )နေထိုင်လိုသူများအတွက် အဆင်သင...
လုံးခြင်း အိမ်နှင့် ခြံ ရောင်းမည်
Property, Property Agents, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | myint thu | February 1, 2014
Property, Property Agents, Property for Sale, Wanted | Than Tun Aung | February 1, 2014
ရူ့ခင်းသာမြို့ပတ် ၂ လမ်း မ ပေါ်ခိုင်ရွှေဝါမှတ်တိုင်အနီး (၇)အရှေ့ရပ်ကွက်သာကေတ . 40 X 60 , RC 7RC၂ထပ်Materbed roomမပါ Total5bed room အိမ်အကျယ်က၃၀ x ၅၀ . ဂရမ...